Lahatsoratra momba an'i Russia
Banky tsara indrindra any Rosia
Enga anie 6, 2022 Shubham Sharma Banks, Rosia
Banky foibe sy banky ara-barotra no mandrafitra ny rafitra banky ao Rosia. Ny banky Rosiana sy ny andrim-panjakana mpampindram-bola dia manara-maso ny Bank of Russia, izay manome alalana amin'ny banky amin'ny banky ao amin'ny firenena ihany koa. Banky 239 no manana fahazoan-dàlana manerantany, izay
Trano sy fanofana any Rosia
Janoary 17, 2022 Demi trano, Rosia
Orinasa manana trano na tompon-trano mivantana no mitantana ny hofan-trano. Tena azo inoana fa hanome trano hipetrahan'ny mpiasa vahiny ny mpampiasa lehibe. Amin'ity tranga ity dia alao antoka fa toerana azo antoka hipetrahana izy ary mahafeno ny fepetra rehetra alohan'ny hifindra
Ahoana no hahazoana visa ho an'i Rosia?
Janoary 10, 2022 Demi Rosia, visa
Ny visa rosiana dia fahazoan-dàlana miendrika sticker miraikitra amin'ny pasipaoro ho an'ny mpandeha. Manampy ny tompony hiditra sy hiaina ary handao an'i Russia ao anatin'ny fotoana voafaritra izany. Ahitana antsipiriany toy ny: Fidirana sy fiaingana
Ahoana no hahazoana asa any Rosia?
Janoary 4, 2022 Demi asa, Rosia
Manana fotoana samihafa i Russia, ary matetika ireo matihanina be karama indrindra dia ireo mpila ravinahitra. Ny mpiasa an-tsambo miasa any Russia dia laharana faha-13 amin'ny lisitr'ireo mahazo vola be indrindra amin'ny taona 2014. Ny teratany vahiny rehetra izay te-hiasa ao Russia dia tsy maintsy
Oktobra 30, 2020 Shubham Sharma India, Rosia, Travel, visa
Ny fangatahana visa hitsidika an'i Russia avy any India dia tsy dia sarotra loatra. Amin'ity lahatsoratra ity dia ho fantatrao ny fampahalalana feno momba ny Visa Rosiana ho an'ny Indiana. Ho tonga eto ianao: Hafa
Fomba fandinihana any Rosia: Torolalana dingana
Aprily 28, 2020 Demi Rosia, fianarana
Raha te hianatra any Rosia ianao, misafidiana hoe inona sy aiza no tianao hianarana. Hamarino koa raha mila miomana amin'ny teny Rosiana ianao satria ny ankamaroan'ny fampianarana dia amin'ny fiteny Rosiana. Raha vao manapa-kevitra ianao
Ahoana ny fomba fangatahana fialokalofana any Rosia?
Aprily 24, 2020 Shubham Sharma mpitsoa-ponenana, Rosia
Aoka hatao hoe te hangataka fialokalofana any Russia ianao, dia tokony hanatona FMS. Ary koa, ny Federal Migration Service (FMS) no hany vatana ao Russia izay misahana ny raharahan'ny mpitsoa-ponenana. Handray ny toeran'ny mpitsoa-ponenana na hanana fialokalofana vonjimaika any Russia.